MW:Farmaajo oo kulamo dhiirigelin ah la qaatay Guutada 14-ka October | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta MW:Farmaajo oo kulamo dhiirigelin ah la qaatay Guutada 14-ka October
MW:Farmaajo oo kulamo dhiirigelin ah la qaatay Guutada 14-ka October
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaka gaaray magaalada Marka ee Gobalka Shabeellaha Hoose ayaa kulamo xog wareysi ah la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi.
Ujeeddada safarka Madaxweynaha ayaa ah in uu dhiirrigeliyo Guutada 14-ka Oktoobar ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo ku hirgashay baaqii Madaxweynaha ee ku aaddanaa in dhallinyaradu ay u istaagaan difaaca dalkooda, kaddib xasuuqii Soobbe ee 14-kii Oktoobar sannadkii 2017kii.
Guutadan ayaa haatan ku guda jirta hawlgallo ciidan oo ka dhan ah Al Shabaab, iyadoona bartilmaamsanaysa in ay meleyshiyaadkaas ka sifeeyaan guud ahaan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey bulshada ku dhaqan magaalada Marka sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa, waxa uuna ku dhiirrigeliyey in ay ilaashadaan nabadgalyada haatan ka jirta magaalada Marka kaddib markii ay Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ka saareen Al Shabaab.
Kaddib aragti wadaag ku saabsan caqabadaha la xiriira dib u heshiisiinta magaalada, dagaalka ka dhanka ah Alshabaab iyo talooyin ay soo jeediyeen waxgaradka uu la kulmay Madaxweynuhu, waxa ay isla garteen in la xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxaysa odayaasha dhaqanka, bulshada iyo cutubyada ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka ee halkaas ka wada hawlgallada dalka lagaga sifaynayo Alshabaab.